ဆောက်လုပ်ရေးဂျော့ဘ်နှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး | USAHello | USAHello
تعرف على صناعة البناء والتشييد وأنواع مختلفة من وظائف البناء والإصلاح. اقرأ عن المسارات المهنية المختلفة التي يمكنك اتخاذها في البناء والإصلاح. သင်လိုအပ်သင်တန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေစတင်ရန်ရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့အထဲက Find.
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အလုပ်သမားလုပ်သားအင်အား၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများမြေနှင့်အဆောက်အဦများထုတ်လုပ်ဘို့စက်၏အသုံးပြုမှု, လမ်းများနှင့်အခြားအဆောက်အဦများကွိုတငျပွငျဆငျ. အဆောက်အဦးများနှင့်စက်ယန္တရားအလုပ်သမားများ၏ပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုပြင်ခြင်း. ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များသင်နှင့်ပြုပြင်ဘို့သင့်လျော်သောများမှာထွက်ရှာမည်.
အဆိုပါ السباكون– ပြဿနာတွေရှိပါတယ်အခါရေပေးဝေရေးလိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းများနှင့်ထည့်သွင်း. သူတို့ကအစထိုကဲ့သို့သောပန်းကန်ဆေးစက်အဖြစ်ရေလိုင်းများချိတ်ဆက်ကိရိယာဖြေရှင်းနိုင်. သင်တစ်ဦးပိုက်လိုင်စင်ရရှိရန်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်လိုင်စင်ရရှိရန်မည်သို့ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်ရေပိုက်သမားများအတွက်လိုင်စင်ဥပဒေများကို
အော်တိုစက်ပြင် စစ်ဆေးရေးနှင့်ကားတစ်စီးပြုပြင်. လုံလောက်အောင်ရေနံနှင့်အခြားအရည်ကားလည်းမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ. တချို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလေ့ကျင့်ရေးမော်တော်ယာဉ်ပညာရှင်များလိုအပ်. မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပညာရှင်များအတှကျသငျခနျးစာ
အကူအညီ လက်သမားအလုပျသမား သစ်သားနှင့်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းအဆောက်အဦးများနှင့်အရာဝတ္ထုများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်. , ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသောတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦပြုမည်. စင်ကြယ်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အလုပ်ဒေသများ. အဘယ်သူမျှမပုံမှန်ပညာရေးကဒီအလုပ်အတွက်လိုအပ်ရှိပါတယ်. လက်သမားလုပ်သားများကိုလေ့လာပါ
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကျောက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်. အဆိုပါအဆောက်အဦးမြို့ရိုး, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ဟင်းလင်းပြင်နှင့်ဖို့အတွက် walkway. သင်တစ်ဦးတရားဝင်ပညာရေးမလိုအပ်ပါဘူးနှင့်အလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်ရေးရလိမ့်မယ်.
အဆောက်အဦးကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်ဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်များကို set up အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ. အသုံးပြုရလိမ့်မည်ဟုပစ္စည်းများတင်ချ. တစ်ခါတစ်ရံသငျသညျသစ်ကိုအဆောက်အဦး၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အဆောက်အဦးများဖျက်သိမ်းစေခြင်းငှါ. ဆောက်လုပ်ရေးဂျော့ဘ်ကိုလေ့လာပါ
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ. ဒါဟာသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်ဖောက်သည်တွေနဲ့ကန်ထရိုက်, ဘတ်ဂျက်နှင့်အလုပ်အပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်. တချို့ကမန်နေဂျာထိုကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်အဆောက်အဦသိပ္ပံသို့မဟုတ်အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လယ်ပြင်၌ဘွဲ့လိုအပ်နိုင်ပါသည်.
အသုံးပြုခြင်း ရိန်း၏အော်ပရေတာ အဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးဖို့ရိန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အကြီးစားစက်တွေ. တစ်ဦးကရိန်းအော်ပရေတာဖြစ်လာစေရန်, သငျသညျအတန်း ယူ. ရိန်းအော်ပရေတာများ၏လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးများအတွက်အမျိုးသားကော်မရှင်အနေဖြင့်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရှိရန်လိုအပ်.
အဆိုပါ ပညာရှင်များဓာတ်လှေကား ဓာတ်လှေကား, စက်လှေကားနှင့်အခြား devices များပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း. သငျသညျနီးပါးငါးနှစ်လေ့လာပြီးသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါ လျှပ်စစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, နေအိမ်များနှင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံများအတွက်လျှပ်စစ်စနစ်များ၏ installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. ဤသည်ကအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လိုင်စင်လိုအပ်သည်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျလျှပ်စစ်သိပ္ပံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်. သင်တို့သည်လည်းလေးနှစ်တွင်အလုပ်သင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်.လျှပ်စစ်ဖြစ်လာဖို့ကိုဘယ်လို
လျှပ်စစ် function ကိုအကြောင်းဗီဒီယိုအား Watch
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုံလောက်တဲ့လူလေ့ကျင့်သင်ကြားကြသည်မဟုတ်. ငါဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်ပြုပြင်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးမှစီမံခန့်ခွဲလျှင်, သင်အမြဲအလုပ်ရှာပါလိမ့်မယ်. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကကျင်းပသည့်အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏လေးပုံတပုံအကြောင်း. ဤသည်တစ်ဦးထက်ပိုဘာသာစကားပြောဆိုရန်အရေးပါသောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်.
တချို့ကပြုပြင်လုပ်သားများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေထွက်သယ်ဆောင်ရန်လူတို့သည်မိမိတို့နေအိမ်များသို့သွားနိုင်ရန်ကူညီ. သငျသညျကလူကိုကူညီခစျြလြှငျ, ဤအလုပ်အကိုင်များကိုက်ညီ. အခွားသောပြုပြင်လုပ်သားများလျင်မြန်စွာတုနျ့ပွနျနှငျ့အလုပျ 24 အရေးပေါ်အခြေအနေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နာရီပေါင်းတစ်ရက်. သင်တို့သည်လည်းခဲယဉ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုနှင့်အအေးသို့မဟုတ်ပူအရပ်တွင်ထွက်အလုပ်လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါမည်.
သငျသညျစက်ယန္တရားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ထပ်မြင့်အဆောက်အဦးပေါ်တွင်ရပ်တည်ရန်ရှိစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမထိုက်မတန်ဖြစ်ကြပြီးအစာရှောင်ခြင်းကိုခံစားသောသူသည်ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမထိုက်မတန် Aalachkas.
بالنسبة للوظائف الأخرى، يمكنك الحصول على التدريب أو الشهادة في كلية المجتمع. ابحث عن كلية مجتمعية بالقرب منك. يمكنك أيضا العثور على التدريب كمتدرب. CareerOneStop နှင့်အတူအလုပ်သင် Find.
إذا كان لديك مؤهلات تقنية أو درجة من بلد آخر، فإن Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်လုပ်အသိအမှတ်ပြုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, ဒုက္ခသည်များနှင့်ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကူညီပေးသည်.
သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါသလား تعلم اللغة الإنجليزية؟
استخدام مركز عمل: အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့. وهم يقدمون المشورة ويحتفظون بقائمة بالوظائف المحلية. أنها تساعد في السير الذاتية وطلبات العمل. يمكنهم ربطك بالتدريب على العمل والتعليم. အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင် Center ကရှာဖွေပါ.